Yaa ku guuleystay abaalmarinta Macallinka sanadka? – Bandhiga
Yaa ku guuleystay abaalmarinta Macallinka sanadka?
Madaxa xarunta Waxbarashada, Nabadda iyo Horumarinta Gaalkacyo ee (GECPD), Mama Xaawo Aden Maxamed ayaa ku guuleysatay biladda caalamiga ah ee Baraha sannadka 2019ka oo uu bixiyo telefishinka afka Ingiriiska ku baxa ee laga leeyahay dalka Turkiga ee TRT World Citizen.
Waxay ay ku mutaysatay 20 sanno in ka badan oo ay ka shaqeynaysay waxbarista Gabadha Soomaaliyeed, Dadka laga tirada badanyahay, iyo Barakacayaasha.Mama Xaawo , ayaa markii lagu dhawaaqay inay ku guuleysatay biladda caalamiga ah waxay sheegtay inay aad ugu faraxsantahay isla markaana ay la qeyb sanayso dadka la shaqeeya.
Waxaa ay horey ugu guuleysatay bilada Nansen, ee ay bixiso hayadda Qaramada Midoobay ee qaxootiga UNHCR iyo biladdo kale oo ay ku heshay shaqooyinka badan ee ay u qabatay bulshada. Biladda Nansen Refugee Award ayaa ah biladaha ugu muhiimsan ee ay bixiso Qaramada Midoobay.
Mama Xaawo Aden oo aasaastay xarunta Waxbarashada, Nabadda iyo Horumarinta Gaalkacyo ee (GECPD) ayaa ilaa sannadkii 1995 waxay ka shaqaynaysay waxbarashada gabdhaha, daryeelka gabdhaha loo geystay gacan hadalka iyo gudniinka fircooniga ah.